NYI LYNN SECK 18+ DEN: Dr. Choochart's Seminar for Myanmar Search Engine
"Search Engine တည်ဆောက်သည့် နည်းပညာ" ဟောပြောပွဲ နှင့် သင်တန်း
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက် (ကြာသပတေးနေ့) နေ့လည် ၂းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ နာရီအထိ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ အခန်း (၂၀၅) တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ NECTEC အဖွဲ့အစည်းမှ Team Leader ဖြစ်သူ Dr. Choochart Haruechaiyasak မှ “Search Engine” တစ်ခုတည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသော နည်းပညာများဖြစ်သည့် Word Segmentation, Opinion Mining အစရှိသည်တို့ကို ရှင်းလင်း၍ လက်တွေ့သရုပ်ဖှောတင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) နံနက် ၉းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ နာရီအထိ Search Engine တည်ဆောက်သည့် နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းတစ်ခုကိုလည်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်း တက်ရောက်လိုသူများသည် ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီး စာရင်း ပေးသွင်းသူများထဲမှ သင့်တှောသူများကို မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) မှ ရွေးချယ်ပြီး အခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် နေ့လည်စာဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံပြီး Coffee Break လည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းဝင်များ၊ Natural Language Processing နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ Search Engine နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄) အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆ သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်သည်။
Dec, 2009 (2:00 – 5:00 PM)
Info-Tech, Room 205
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering, University of Miami, FL, U.S.A.
Master of Science in Computer Engineering, University of Southern California, CA, U.S.A.
Bachelor of Science in Electrical Engineering, University of Rochester, NY, U.S.A.
Team Leader, Intelligent Information Infrastructure section
Research and Development of Thai NLP: NECTEC's Experience
Brief Description of Seminar Topic
The Human Language Technology Laboratory (HLT) of the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) under Thailand's Ministry of Science and Technology (MOST) is one of the leading research groups in Thailand, which has long experience in performing R&D in Thai NLP. We have many successful collaborations with domestic and international organizations, both academic and private companies. Our R&D areas include speech technology (speech recognition & synthesis), machine translation, search engine, question answering system, and language resource and tools. The main goal of this talk is to give an overview of our current R&D progress of Thai NLP. In particular, this talk will focus and present details on the following topics:
Thai word segmentation competition under BEST (Benchmark for Enhancing the Standard of Thai language processing)
LexTo & TLex: Dictionary-based and machine-learning based Thai Word segmentation
Sansarn: Thai Open-Source Search Engine
ABDUL (Artificial Buddy U Love):aplatform for building QA and online help desk systems
Opinion mining in Thai language
Posted by NLS at 12/17/2009 12:36:00 AM
One response to “Dr. Choochart's Seminar for Myanmar Search Engine”
how is "Artificial Buddy U Love" i am really sick about this technology while am an expert in the field of computing and doing some research on high inteligent application any way your Seminar And Discussion should beagreat nurture for the audience as i seen your list of qualification